चुनावी मैदानमा प्रधानमन्त्रीसहित पाँच पूर्वप्रधानमन्त्री कसको अवस्था कस्तो ? – Halkaro
चुनावी मैदानमा प्रधानमन्त्रीसहित पाँच पूर्वप्रधानमन्त्री कसको अवस्था कस्तो ?
काठमाडौँ । आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पाँच जना पूर्वप्रधानमन्त्री प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ । निरन्तर राजनीतिमा सक्रिय पूर्वप्रधानमन्त्री केही आफ्नै पूर्ववत् निर्वाचन क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्दै हुनुहुन्छ भने केहीले नयाँ क्षेत्र रोज्नुभएको छ । यसअघिका चुनावी परिणाम र हालैको स्थानीय निर्वाचनको मत परिणामले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको ‘सेफ’ र ‘डेन्जर जोन’ भने मिश्रित छ ।
भट्टराईका लागि श्रेष्ठ कडा चुनौती हुनुहुन्छ । एमालेको सहयोगमा उम्मेदवार बन्नुभएका श्रेष्ठ पछिल्लो अङ्क गणितमा केही अघि हुनुहुन्छ । भट्टराईलाई काँग्रेसको बलियो साथ छ । पहिलो चरणमा निर्वाचन हुने ३७ क्षेत्रमध्ये अत्यन्तै रोचक निर्वाचन क्षेत्रका रूपमा गोरखा–२ लाई हेरिएको छ । , यो खबर आजकोगोरखापत्रमा छ ।
← सर्वोच्चको लोकप्रिय अादेश र अन्यौलमा पूर्वराष्ट्रपति अावास
अनियमितताको अारोपमा मन्त्रालय तानिएका खड्को दबाबमा अापूर्ती सचिवको सरूवा →